Soo-celinta xiriirka Kenya saameyn maku yeelan karaa Kiiska Badda? | KEYDMEDIA ONLINE
MUQDISHO, Soomaaliya - Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Guuleed ayaa sheegay in dib usoo nooleynta xiriirka diblomaasi ee Kenya uusan wax saameyn ah ku yeelan doonin kiiska muranka Badda.
Mahdi oo hogaaminayay Kooxdii ka socotay Soomaaliya ee Maxkamadda ICJ tagtay ayaa xusay inay Kenya hadda ka dalban karin dowladda in laga laabto Dacwadda, maadaama la dhageystay, islamarkaana go'aan kama dambeys ah la sugayo.
"Muranka badda waxaa soo afjari doona ICJ oo go'aan laga sugayo kadib dhageysigii ay sameysay Maarso 15-18 ee sanadkan. Waxaan sugeynaa xukun cadaalad ah. Xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal waa arrin gooni ah," ayuu yiri Mahdi.
Dad badan ayaa walaac ka qaba in Kenya ay wado qorshooyin ay ku doonayso in Kiiska Badda lagu xaliyo meel ka baxsan ICJ, maadaama ay dhacday dowladii Farmaajo oo horey arintaas u diidanayd, waxaana suurta-gal ah in xukuumadda Rooble wax ka bedesho mowqifkii hore.
Dowladda Kenya ayaa diiday inay ka qeybgasho dhageysigii ugu horeeyay ee Kiiska Badda 15-kii Maarso, iyadoo ku doodey in qareenada Maxkamadda uu ku jiro Cabdulqawi oo Soomaali ah asalkiisa iyo inaysan u diyaargaroobin doodda.
Kiiska Badda waxaa ICJ u gudbisay dowladdii Xasan Sheekh 2014, kadib markii labada wadan ay ku heshiin waayeen wadahadallo soo socday muddo ka badan 10 sano, kadib markii Kenya ay sheegatay dhul-badeed aysan lahayn.
Soomaaliya waxay dooneysaa in cabbirka xadka badda si toos ah loola dhiririyo xadka dhulka, halka Kenya ay dooneyso in la weeciyo [Xagal 45-degree], si ay heshay qeybaha shidaalka uu ku jiro.
Baaxadda uu ku fadhiyo dhul-badeedka badweynta Hindiya, ee lagu muransan yahay waxa uu gaarayaa ilaa 100,000km oo isku wareeg ah, waxaana dal kasta oo kan kale ku eedeynayaa inuu xaraashayo khayraadka shidaalka ku jira.